Deco: Scolari wuu soo celin doonaa Brazil-tii caalamka. - Caasimada Online
Home Warar Deco: Scolari wuu soo celin doonaa Brazil-tii caalamka.
Deco: Scolari wuu soo celin doonaa Brazil-tii caalamka.
Deco ayaa tababare Luiz Felipe Scolari ugu hambalyeey inuu noqday macalinka xulka Brazil wuxuuna u rajeeyey tababarihii hore ee Palmeiras inuu wax wanaagsan ka sameeyo xulka KoonfurAmerica.
64-jirkaan ayaa jagadaan loo magacaabay markii xilkaan laga diray Mano Menezes xilli uu xulka Selecao marti gelinaayo koobka aduunka markiisii labaad, waxayna markaan macalin ka dhigteen ninkii usoo qaaday koobkii aduunka ee 2002dii lagu qabtay Japan iyo South Korea.
Brazil ayaan aheyn xulkii aduunka ka yaabinyey waayo, laakiin ciyaaryahanka qadka dhexee ee Fluminense, oo Scolari kala soo shaqeeyey Portugal iyo Chelsea ayaan la dhacsan siyaasada macalinkaan.
“Waxaan nahay saxiibo isku dhow, Waxaan u maleynayaa inuu Felipao ku fiican yahay kubada cagta Brazil wuxuuna iga soo caawiyey xirfadeyda,” ayuu ciyaaryahankii hore ee Barcelona u sheegay ESPN Brasil.
“Sanado badan ayaan soo wada shaqeynay, sidaas darteed waa qof aanan ilaawi Karin.
“Waan rumeysanahay fikrada ah inuu dib usoo celin karo taageerayaashii Selecao, waana qof yaqaana sida loo sameeyo shaqadaas. Inuu xidigo da’yar xulka kusoo daro ayaa ah inuu soo celiyo xulkiiBrazil.”